भोइस अफ नेपालमा जजनै रुन थालेपछि दर्शकपनि रुन थाले, के भयो त्यस्तो? (भिडियो सहित)
काठमाडौ : दि भ्वाइस अफ नेपाल सिजन–३’ को डिजिटल अडिसन सुरु भएको छ । नेपाल`को नम्बर एक गायन रियालिटी शोको रुपमा स्था`पित भइसकेको
‘दि भ्वाइस अफ नेपाल’ हिमाल`य टेलिभिजनले उत्पा|दन र प्रसारण गर्दै आएको छ । नेपा|ली टेलिभिजन रिया`लिटी शोका सवै`जसो रेकर्ड तोड्दै ‘दि भ्वाइस अफ नेपाल–२’ले करोडौं नेपालीको मन जितेको थियो ।
यो शोको तेस्रो सिजनका लागि शनिवा`रबाट डिजि`टल अडिसन सुरु गरिएको हो । १६ बर्ष उमेर पुगेका यूवायूवतीदेखि ४५ बर्ष`सम्मका प्रतिभाहरुले यो रिया`लिटी शोमा भाग लिन पाउनेछन् । डिजिटल अडिसन`मार्फत् आफ्नो गीतको भिडि`यो रेकर्ड पठाई आवेदन दिन सकिनेछ ।
नेपाली गीत संगीतको सबैको प्रिय का`र्यक्रम बनेको एक मात्र चर्चित रियालिटी सो दि भोइस अफ नेपालको आजको कार्यक्र`मको सुरुवातमै जजहरुको रुवा`बासी चलेको छ।
एक्कासी गायक राजु लामा रुन थालेपछि संगै बरिष्ठ गायक तथा सर्जक दिप श्रेष्ठ रु`न पुगेका थिए। दिप श्रेष्ठले पुरानो गीत गाए`पछि राजुको आँखा`मा आँ`सु भरिएको थियो।
राजु लामालेनै जबर्ज`स्ति दिप् श्रेष्ठला`ई उक्त गीत गाउन लगाएका थिए।
निकै रूहाउने कहानी जोडिए`को गीतले राजुको मन छोयो ज`सको कारण स्टेजनै सुन्य भयो सबै`लाई केहि समय भाबुक बनायो। एता प्रमोद खरेल पनि भाबुक भ`एका थिए। यो बेला युटुबमा स`र्बाधिक हेरिने कार्यक्र`म बनेको छ दि भोइस अफ नेपाल।
हिमालयन टेलिभि`जनले प्रशारण गर्ने उक्त कार्यक्रम दि भोइस अफ नेपालकै युटुब च्यानल मार्फत सार्बज`निक हुने गर्दछ।सिजन ३ को ५ औं भागमा यो बेला स`बैलाई रूहाउने भाग बनेको छ। अन्य कला`कारहरु जो सहभागी भएका छन सबैको आँखा रसा`एका छन।केहि न केहि नया कुराले सबैलाई छोएको छ। यो हप्ता`को दि भोइस अफ नेपा`ल कस्तो छ ?
२०७७ चैत्र २५, बुधबार ०३:४६ गते0Minutes 2124 Views